ကြားသိရသမျှ Archives - Padaethar
မနေ့ညက ထမင်းစားပီး ရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်း စိန်တစ်လုံး သရက်သီးစားလိုက်သောအခါ….
မနေ့ညက ထမင်းစားပီး ရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်း စိန်တစ်လုံး သရက်သီး စားတယ် စားတဲ့အချိန် ဘာအရသာမှ မရှိဘူး လုံးဝကို မချိုတာ …. ဒါမယ့် မသိဘူး ပုံမှန်ဘဲ ထင်တာ …. စားပီး သိပ်မကြာဘူး ဗိုက်ထဲက ထိုးအောင့်လာတယ် … အိမ်သာတက်ချင်လာတယ် …အဲ့ဒါနဲ့ အိမ်သာထဲ ဝင်လိုက်တယ် … ရေချိုးခန်း နဲ့အိမ်သာကတွဲရက် ဘိုထိုင်ပေါ်ထိုင်နေရင်း ဗိုက်အရမ်းအောင့်လာတယ် …. အန်ချင်လာတယ် ချွေးစေးတွေထွက်လာတယ် မျက်လုံးတွေ ပြာလာတယ် …. သန့်ရှင်းရေး မြန်မြန်လုပ်ပီး ရေပန်းအောက် ခဏထိုင်တုန်း အန်ချင်လာတယ် … အန်တယ် မရဘူး အိမ်သာပေါ်ပြန်ထိုင်တယ် ….. လူက ခွေကျလာပီးရေချိုးခန်းထဲ လှဲအိပ်ချင်တာ တားမရဘူး…. ဇောချွေးတွေ ရွဲနှစ်ပီး မျက်လုံးထဲ ဘာမှ … Read more
တစ်နာရီ (၈၀၀၀) ပဲ ယူတယ်ဆိုတဲ့ မော်ဒယ်အလန်းမလေး အွန်လိုင်းပေါ်မှာ နာမည်ကြီးနေ…
April 9, 2021 by Padaethar
မော်ဒယ်အသစ်ကလေး ဖူးဖူးပြည့်စုံရဲ့ ပို့စ်အောက်မှာတော့ သူ့ကို အားပေးစွဲလမ်းနေသူ ပုရိသအပေါင်းတို့နဲ့ စည်ကားနေခဲ့ပြီး ရင်ထဲကို အတုန်းအရုံး ထိခဲ့ရပါပြီဆိုသူတွေကလည်း တခဲနက်ကိုအားပေးနေကြတာတွေ့ကြရပြီး ကြည်နူးနှစ်သိမ့်စရာတွေနဲ့ ကွန်မန့်တွေနဲ့ စနောက်ကျီစယ်နေကြသလို… တစ်နာရီ ၈ ထောင်နဲ့ ကားမောင်းပို့ပေးမယ်ဆိုမဟားဒရားတန်လွန်းလို့ ဘွတ်ကင်တင်မယ့်ဆိုသူတွေလည်း အလုအယက်ဖြစ်နေကြတာပါ။သူ့ရဲ့အ လှအောက်မှာ ခွေယိုင်လဲရပြီဆိုသူတွေကလည်း ရာသန်ပန်ငှါးချင်ပါတယ်။ ဘယ်မှမသွားပဲ ထိုင် ကြည့်နေမိမှာ နှစ်နာရီလောက်။မမ နဲ့သာဆို လိုက်ပြီးသား စသဖြင့် ကွန်မန့်တွေနဲ့ ရေး သား အားပေးနေကြတာကို တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ချစ်ပရိသတ်ကြီးတို့ရေ။ကဲ …အခုပဲလက်တို့သတင်းပေးမျှဝေလိုက်ပါပြီနော်။ တစ်နာရီ ၈၀၀၀ ပဲ ယူတယ်ဆိုတဲ့ မော်ဒယ်မလေး လူမှုကွန် ရက်မှာ ရေပန်းစားနေလူမှုကွန်ရက်မှာ လက်ရှိနာမည်ကြီးနေပြီး ပေါက်နေတာကတော့ ပုရိသတွေကြားမှာကြည်နူးနှစ်သိမ့်စေတဲ့ ဆွဲေ င်မှုတမျိုးနဲ့ အပျံစား ဆက်ဆီကျကျ မော်ဒယ်လေး ဖူးဖူးပြည့်စုံ (Phoo Phoo … Read more
လှည်းတန်း လမ်းမပေါ် လူမရှိပဲ ရီသံတွေထွက် ကြည့်ပြီး ကြက်သီးထမိတယ်
April 5, 2021 by Padaethar
လှညျးတနျးလမျးမပျေါ လူမရှိပဲရီသံတှထှေကျ ကွညျ့ပွီး ကွကျသီးထမိတယျ လှညျးတနျးလမျးမပျေါ လူမရှိပဲရီသံတှထှေကျ လှညျးတနျးအနီးတဈဝိုကျကအိမျမှ ယခုအသံကို Videoရိုကျရငျး ဖမျးယူရရှိမိကွောငျးသိရ 00:27 00:55 လှည်းတန်းလမ်းမပေါ် လူမရှိပဲရီသံတွေထွက် ကြည့်ပြီး ကြက်သီးထမိတယ် လှည်းတန်းလမ်းမပေါ် လူမရှိပဲ ရီသံတွေထွက် လှည်းတန်းအနီးတစ်ဝိုက်က အိမ်မှ ယခုအသံကို Videoရိုက်ရင်း ဖမ်းယူရရှိမိကြောင်းသိရ 00:27 00:55 #crd video
မြောက်ဥက္ကလာရဲ့ GENERATION Z ဝိညာဉ်တို့နိုးထလာလေပြီ
မွောကျဥက်ကလာအဝိုငျးတှငျ မကြှတျမလှတျသောဝိညဉျမြားကွောငျ့ ညတိုငျးခြောကျလှနျ့ခွငျးခံ7ရနရေတဲ့ရဲတဈဖှဲ့ဝငျမြားအကွမျးဖကျဖွိုခှငျးခံရပီးအသကျပေါငျးမြားစှာပေးဆပျလိုကျရတဲ့ မွောကျဥက်ကလာအဝိုငျးနားမှာလူသမှေုတှမွေောကျမြားစှာဖွဈပျေါခဲ့ပါတယျ။ ညဘကျ၃နာရီလောကျဆိုဆိုရငျ လူစုလူဝေးနဲ့အသံကွားလို့ တပျဖှဲ့တှသှေားကွညျ့တာပါ ဘာမှတော့မတှခေဲ့ပါဖူး အျောဟဈသံမြားလိုကွားရပီး သှားကွညျ့ရငျဘယျသူမှမရှိဘဲဖွဈနခွေငျး စဈကားတနျးလာနတေဲ့အခြိနျကားမီးအရှအေ့ရိပျလိုလိုမြားဖွတျဖွတျသှားကွောငျး၊ ကယျကွပါ၊ယူကွပါအသံမြားညစဉျညတိုငျးကွားနရေကွောငျးတာဝနျကရြဲတပျဖှဲ့ဝငျတဈယောကျကဝငျခံလာပါတယျ။ အသံတှကေလညျးနီးနီးလေးကဘဲအျောနသေလိုလို အရိပျတှကေတော့အနားကဘဲဖွတျသှားတာသှားကွညျ့ရငျမရှိတော့ဖူး၊ပီးတော့မှောငျထဲကွညျ့လိုကျရအေိုငျနသေလိုမြိုးအကှကျတှတှေနေ့တောအမှတျတမဲ့ဆိုသှေးကှကျနဖွေဈနသေလိုမြိုး၊မီးထိုးကွညျ့ရငျဘာမှမရှိဖူး၊တဈဖှဲ့ဝငျတှကေတောထဲက သားရဲကောငျတှသောမကွောကျတာဗြာ၊မမွငျရတော့အားလုံးကွောကျနကွေတယျ။ တဈနကေ့ တပျကတပျသားတဈယောကျတဈညတုနျးကဝငျပူးခံရတယျပီးတော့ ကယောငျကတနျးတှပွေောနတော၊အစကဖြားနတောဘဲထငျကွတာ နောကျတော့မှဗိုလျကွီးက ရိပျမိသှားပီး ဖတျရှတျ၊ပရိတျရတေိုကျတာတို့ဖနျြးတာတို့လုပျလိုကျမှ ထှကျသှားတာ၊နောကျဆုံးမှာ အမြှမဝနေဲ့ဆိုတာပီပီသသကွီးပွောသှားသေးတယျ။ အာ့လိုမြိုးတှကေတဈယောကျနှဈယောကျကွုံရတာမဟုတျဖူးလေ၊ည ဂြူတီကတြဲ့တဈဖှဲ့လုံးကွုံနရေတာဆိုတော့လညျးပွောရခကျတယျပေါ့၊တခြို့တပျသားပေါကျစလေးတှဆေိုလနျ့ပီးကွောကျဖြားဖြားနကွေတယျ၊ညနကျပိုငျးတှဆေိုပွဿနာဖွဈတာတှမြေားလာတယျ၊ရဲဘျော၂ယောကျရနျဖွဈပီးအခငျြးခငျြးပဈမယျခတျမယျတှဖွေဈလို့ဗိုလျကွီး ဒဏျပေးထားရတယျ။ အထကျကိုတော့မငျးမိနျ့နဲ့နှငျခိုငျးဖို့တော့တငျပွထားပါတယျလို့ပွောပွလာပါတယျ၊မကောငျးမှု့ကနောငျဘဝမကူးပါဘူး အခုပဲလကျတှခေံစားနရေပီ ကဆြုံးသှားတဲ့အာဇာနညျတှကေသဆေုံးတာတောငျအနားမယူကွသေးဘဲဆကျတိုကျပှဲဝငျနကွေတာပွညျသူတဈယောကျအနနေဲ့အရမျးဝမျးနညျးခံစားရပါတယျ။ အခုလိုအခြိနျပေးပွီးဖတျရှုပေးကွတဲ့ ပရိသတျကွီး အားလုံးလညျးသာယာပြျောရှငျသောနလေ့ေးကိုပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျနျော။ Crd-Original Post မြောက်ဥက္ကလာအဝိုင်းတွင် မကျွတ်မလွတ်သောဝိညဉ်များကြောင့် ညတိုင်းချောက်လှန့်ခြင်းခံ7ရနေရတဲ့ရဲတစ်ဖွဲ့ဝင်များအကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းခံရပီးအသက်ပေါင်းများစွာပေးဆပ်လိုက်ရတဲ့ မြောက်ဥက္ကလာအဝိုင်းနားမှာလူသေမှုတွေမြောက်များစွာဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ ညဘက်၃နာရီလောက်ဆိုဆိုရင် လူစုလူဝေးနဲ့အသံကြားလို့ တပ်ဖွဲ့တွေသွားကြည့်တာပါ ဘာမှတော့မတွေ့ခဲ့ပါဖူး အော်ဟစ်သံများလိုကြားရပီး သွားကြည့်ရင်ဘယ်သူမှမရှိဘဲဖြစ်နေခြင်း စစ်ကားတန်းလာနေတဲ့အချိန်ကားမီးအရှေ့အရိပ်လိုလိုများဖြတ်ဖြတ်သွားကြောင်း၊ ကယ်ကြပါ၊ယူကြပါအသံများညစဉ်ညတိုင်းကြားနေရကြောင်းတာဝန်ကျရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်ကဝင်ခံလာပါတယ်။ အသံတွေကလည်းနီးနီးလေးကဘဲအော်နေသလိုလို အရိပ်တွေကတော့အနားကဘဲဖြတ်သွားတာသွားကြည့်ရင်မရှိတော့ဖူး၊ပီးတော့မှောင်ထဲကြည့်လိုက်ရေအိုင်နေသလိုမျိုးအကွက်တွေတွေ့နေတာအမှတ်တမဲ့ဆိုသွေးကွက်နေဖြစ်နေသလိုမျိုး၊မီးထိုးကြည့်ရင်ဘာမှမရှိဖူး၊တစ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတောထဲက သားရဲကောင်တွေသာမကြောက်တာဗျာ၊မမြင်ရတော့အားလုံးကြောက်နေကြတယ်။ တစ်နေ့က တပ်ကတပ်သားတစ်ယောက်တစ်ညတုန်းကဝင်ပူးခံရတယ်ပီးတော့ ကယောင်ကတန်းတွေပြောနေတာ၊အစကဖျားနေတာဘဲထင်ကြတာ နောက်တော့မှဗိုလ်ကြီးက ရိပ်မိသွားပီး … Read more
အသက်မပြည့်သေးဘဲ ပြည့်တန်ဆာလောကထဲ ရောက်သွားရတဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်အကြောင်း
ရနကှုနှ – ကှနတှောမှကှမှနှးတနှးမိနတေဲ့ ပှည့တှနဆှာမလေးတဈယောကကှို HIV ပိုး ရှိသူမှား အားထားရာ ရနကှုနမှို့က အခမဲ့ ဆေးပေးခနှးတဈခုမှာ မကှာသေးခငကှ တှလေို့ကရှပါတယှ။ သူနဲ့အတူပါလာတဲ့ အသကှ ၄ဝ ဝနှးကငှ အရှယှ အမှိုးသမီးဟာ သူ့မိခငဖှဈပှီး သူ့လိုပဲပှည့တှနဆှာအလုပှ လုပကှိုငသှူပါ။ မိခငအှတှကှ လိုအပတှဲ့ ဆေးဝါး ထုတယှူဖို့ ဆေးခနှးရောကနှကှတောလို့ ဆိုပါတယှ။ ခနဓွာကိုယနှဲ့ရငှး အသကမှေးဝမှးကှောငှးပှုတဲ့ အရပှ ၄ ပေ ကှောကှော၊ အသား ညိုညို၊ပိနပှိနပှါးပါး မဝတရှညှ(အမညလှဲ) က ဒီနှဈဆနှးပိုငှးကစပှီး ရနကှုနမှို့လယမှာ အရှယစှုံ ပှည့တှနဆှာတခှို့နဲ့အတူဖောကသှညစှောင့နှတတသှေူပါ။ မှို့ထဲလမြးမပြေါ ရှိနတတေတြဲ့ ဒီမိနြးကလေးကို တှေ့တာနဲ့ အသကြ ၁၈ နှဈ မပှည့သြေးဘူး ဆိုတာကို အလှယတြကူ သတိထားမိကှပါလိမ့မြယြ။ ရနကှုနရှဲ့ စောဘှားကှီးကုနှး၊ … Read more
March 30, 2021 by Padaethar
ဒီအဖွဈအပကျြကတော့ ဘယျသူကတော့ ထငျထားမိတဲ့အရာမြိုး မဟုတျခဲ့ပါဘူး ။ အဆိုပါ လမျးမကွီးဘေးမှာ မစငျစှနျ့ခဲ့ရတဲ့ မိနျးကလေးရဲ့ Video ဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ December 27 ရကျနကေ့ Facebook စာမကျြနှာပျေါမှာ အတျောလေးရပေနျးစားခဲ့ပါတယျ ။ အဆိုပါအဖွဈအပကျြဟာ Johor- Singapore ဆိုတဲ့ မလေးရှားနိုငျငံ နဲ့ စငျကာပူနိုငျငံကိုဆကျသှယျထားတဲ့ လမျးမကွီးပျေါမှာ ဖွဈပကျြခဲ့တာပါ ။ အဆိုပါ ယာဉျကွောပိတျဆို့မှုကွောငျ့ လမျးမကွီးပျေါရှိကားတှထေဲမှာ ခရီးသှားတှအေပွညျ့ရှိနခေဲ့တာပါ ။ ထို့အပွငျ video ထဲမှာတှရေ့တဲ့အတိုငျး ကောငျလေးတဈယောကျက အဆိုပါမိနျးကလေးရဲ့ဘေးမှာ ကာကှယျပေးတဲ့အနနေဲ့ထိုငျနခေဲ့ပမေဲ့လညျး မွငျရတဲ့သူတှကေတော့ မွငျနရေဆဲပါဘဲ ။ ကောငျလေးက ကောငျမလေးရဲ့ခါးကိုကိုငျထားပေးပွီး သူမ မစငျစှနျ့နတောကို ကူညီပေးနခေဲ့တာပါ ။ အဆိုပါ video ကို ရိုကျယူခဲ့တဲ့ အမြိုးသားကတော့ “Oh … Read more
ပါးကွပ်ကျားနဲ့ ငါတို့သမီးလေး …ဒီအပေါက်လေးကထွက်သွားတာ ခုထိပြန်မလာသေးဘူး
အိမ်ထရံမှာ ခဲတံလောက်အပေါက်လေးရှိတယ် ။ ပါးကွပ်ကျားနဲ့ ငါတို့သမီးလေး ဒီအပေါက်လေးကထွက်သွားတာ ခုထိပြန်မလာသေးဘူး ။ မစောင့်နိုင်တဲ့အဆုံး…. အမေဖြစ် ထရံပေါက်က ချောင်းကြည့်တော့ သွေးစွန်းနေတဲ့ သေနက်ပြောင်းတွေတွေ့တယ် ။ အဲဒီနောက်မှာ သွေးအလိမ်းလိမ်းမြန်မာပြည်ကို ခုတ်ထစ်ချက်ပြုတ်ထားတဲ့ မီးရောင်တဝင်းဝင်းနဲ့ ညစာစားပွဲကြီးတွေ့တယ် ။ အဲဒီထဲက အကြီးဆုံးစားပွဲဝိုင်းပေါ်မှာ သမီးလေးရဲ့ သွေးစက်တွေကို ဝိုင်လုပ်သောက်နေတဲ့ ဘုရားဒကာကြီးထိုင်နေတယ် ။ ဘေးပတ်လည်အမှောင်တောထဲ ​ငိုညည်းသံများလဲကြားနေရတယ် ။ ငါ့သမီးလေး …. ငါ့သမီးလေး လို့အော်ပြီး အမေလဲကျသွားတော့ …. အဖေက ထရံပေါက်က ချောင်းကြည့်ပြန်တယ် ။ ဒီလိုနဲ့ …..မိသားစုတွေ တယောက်တလှည့် … ဒီ ထရံပေါက်လေးက မခွာနိုင်ခဲ့ဘူးတဲ့ ။ တကယ်တော့ တပြည်လုံးရင်ထဲမှာ အဲဒီလို အပေါက်လေးကိုယ်စီနဲ့ ။ ​၂၇-၃-၂၀၂၁ … Read more
သရုပျဆောငျလူမငျးရဲ့ နောကျဆုံးရ အခွအေနေ…
သရုပျဆောငျလူမငျးရဲ့ နောကျဆုံးရ အခွအေနေ ကို လူမငျး အငျးစိနျထောငျမှာ ရှိပါတယျတဲ့။ အစက တိုကျမှာထားပမေယျ့ အခု အဆောငျမှာပါ … တဲ့။ တိုကျမှာထားတယျဆိုတာ တိုကျပိတျတာ မဟုတျဘူးနတေိုကျဆိုတာ တခနျးစီ ထားတဲ့ တနျးလြားလေး၊ အဆောငျဆိုတာ ဟောခနျးကွီးလို လူအမြားကွီးစုနတော။ ကို မငျးထငျ၊ ကိုကိုကွီး၊ မငျးသှေးသဈ၊ ကိုမွအေး၊ ကိုသာခြို၊ မသနျးမွငျ့အောငျ၊ စောဖိုးခှား တို့လညျး အငျးစိနျထောငျမှာပဲတဲ့။ ကိုရဲမငျးဦးလညျး နံရိုးတှကြေိုးအောငျ နှိပျစကျခံရကွောငျးသတငျးထှကျခဲ့ပမေဲ့ ခုတော့ ထောငျရိပျသာမှာ သကျသာပါတယျတဲ့။ ကို လူမငျး အငျးစိနျထောင်မှာ ရှိပါတယ်တဲ့။ အစက တိုက်မှာထားပမေယျ့ အခု အဆောင်မှာပါ … တဲ့။ တိုက်မှာထားတယ်ဆိုတာ တိုက်ပိတ်တာ မဟုတ်ဘူးနတေိုက်ဆိုတာ တခနျးစီ ထားတဲ့ တနျးလျားလေး၊ အဆောင်ဆိုတာ … Read more
March 28, 2021 by Padaethar
ကျမ ဒီနေ့ နေ့ခင်း မြောက်ဥက္ကလာ ကနေ လှည်းတန်းသွားတော့ တက္ကစီ ငှားစီးသွားတယ်။ ကျမက ဖေ့စဖုတ် ကြည့်နေကျလူဆိုတော့ တက္ကစီကို သေချာရွေးပြီး ငှားရတယ်။ ကားထဲမှာလူပိုပါသလား။ အဲကွန်းဖွင့်ထားသလားကြည့်ရတယ်။ ဆေးခပ် မှာကြောက်လို့။ အဲဒါနဲ့ ကားငှားတာ တော်တော် ကြာသွားတယ်။ နောက်ဆုံး တက္ကစီတစ်စီးကျတော့မှ ကားသမားပုံစံကလည်း ရိုးသားတဲ့ ပုံပေါ်တယ်။ အဲကွန်းလည်းဖွင့်မထားဘူး။ လူပိုလည်းမပါဘူး။ ပိုစိတ်ချရအောင် ထပ်မေးလိုက်သေးတယ်။ လူထပ်တင်မှာလား။ လမ်းမှာ အဲကွန်းဖွင့်မှာလား ဆိုတော့ လူထပ် မတင်ပါဘူး တဲ့။ အဲကွန်းကလည်း ပျက်နေတာ တဲ့။ ဖွင့်ချင်ရင်တောင် ဖွင့်လို့မရဘူးတဲ့။ အဲဒီ့အချိန်မှာပဲ သတိရလို့ ထပ်မေးကြည့်လိုက်တယ်။ ကားမောင်းနေတုန်း ဖုန်းမကိုင်ရဘူး။( ဘာညာဗီဒီယိုကားတွေ ဖုန်းနဲ့ဖွင့်ပြတာ ဖေ့စဖုတ်ထဲ ဖတ်ဖူးတယ်လေ) တစ်ထောင်ပိုပေးမယ် ဆိုတော့ သူက … Read more
သနျးခေါငျယံက ကွောကျစရာလူလဲပှဲ (သို့) တက်ကစီသမား တဈယောကျရဲ့ ထိတျလနျ့ဖှယျဖွဈရပျမှနျ
သနျးခေါငျယံက ကွောကျစရာလူလဲပှဲ (သို့) တက်ကစီသမား တဈယောကျရဲ့ ထိတျလနျ့ဖှယျဖွဈရပျမှနျ အထကျပုဇှနျတောငျ လမျးမကွီး၏တဈနရောတှငျ ဖွဈသညျ။ဝယေံစိုးသညျ သူ၏ Fielder တက်ကစီကားလေးအား ကားပါကငျထိုးပွီး ခရီးသညျအား မြှျောနမေိသညျ။ ခုတလော ကားဆှဲမကောငျးလှ။ထို့ကွောငျ့ညဉျ့နကျ ခံပွီးဆှဲနရေ သညျ။တျောသေးသညျမှာ သူ့ကားက gas ကား ဖွဈနခွေငျးကွောငျ့ ဆီကားတှလေောကျ ပူပနျစရာ မလို။ ဒါမှ မဟုတျလြှငျ အိမျပငျပွနျရမညျ မဟုတျ။ သညျလိုနှငျ့ ည ၈နာရီ ၂၀ မိနဈခနျ့တှငျ”အောငျခွငျးရှဈပါး အသံကွားတဲ့ အခါ…”သူ့အကြီင်္ိအိတျကပျထဲမှ ဖုနျး Ringtone သံကွောငျ့ ဖုနျးကိုထုတျလိုကျသညျ။ “ဟယျလို””ဝယေံလား ငါပါ မြိုးညှနျ့ပါ””ဟာ ဆရာမြိုး ဟုတျကဲ့ အမိနျ့ရှိပါ ဆရာ””အေး ငါ ထမလုံပွနျမလို့ မငျး ကား အားလား အခု ဘယျမှာလဲ””ဟုတျ … Read more